A isiphuzo ethandwa kakhulu eRussia ukuthi emakhulwini amaningana eminyaka kuyinto kvass. Kuyinto kahle, acima ukoma, ngaphezu, kunobuciko emnandi kanti iphunga, kodwa futhi ewusizo kakhulu. Kunezindlela eziningana ukuze alungiselele phisa ekhaya. Omunye wabo - ukuthatha powder isiqediwe futhi Mash, okuyinto edayiswa ezitolo eziningi, engeza amanzi, bese ulinda izinsukwana. Nokho, tastier okuningi futhi kujabulise kakhudlwana ukuze uthole isiphuzo esenziwe ngokwakho, ngomzamo okuningi ke ngeke, njengoba kukhona ezihlukahlukene omkhulu zokupheka.
Ngokwesibonelo, omunye zokupheka ezivamile futhi elula, indlela ukupheka kvass, ozolandela. Udinga salokhu rye crackers (kangcono ukuthatha ekhaya futhi ayikulungele), omisiwe imvubelo, amanzi abilisiwe. Kilogram crackers egcwele amanzi afudumele, sahamba amahora amabili emazingeni okushisa okuvamile. Lolu ketshezi okuholela is elicwengekileyo akhanywa endishini ehlukile, egcwele breadcrumbs ofakwe futhi abilisiwe amanzi sabe sesidlulela kwamahora ambalwa. yesibili ketshezi ehlungiwe ukungezwa ngowokuqala bakufaka ushukela (isigamu ingilazi 3 amalitha) nemvubelo (40 grams), zonke kwesokunxele usuku ukushisa. Emva kwalesi sikhathi, lesi siphuzo is selehlile futhi ilungele ukusetshenziswa.
Enye indlela indlela ukulungiselela ekhofini ekhaya: lena iresiphi ngoju. On iphawundi lo mkhiqizo uzodinga esilinganayo omisiwe 25 amagremu of imvubelo kanye ingilazi ufulawa. Zonke izithako axutshwa, ibekwe endaweni esitsheni 25 amalitha. Ngomusa ostuzhennoy ethela amanzi abilisiwe, ingxube kwakudalwa ukugwema ukwakha izigaxa ishiywa sokunika ngesonto. Lesi siphuzo sibizwa elicwengekileyo, selehlile futhi kungenziwa wakhonza etafuleni. Kvass agcinwe endaweni esitsheni uphawu kule esiqandisini izinsuku ezimbalwa. Etholwe ukuvutshelwa nezilwanyana ezincane kanye izinto eziwusizo ukuze wokugaya ukudla bese izinhlelo kwegazi. Kuwufanele sokunaka izinga kanye flavour of imvubelo, ngoba kuzo izoncika kakhulu ukunambitheka kanye nephunga elimnandi we isiphuzo.
Ukukhuluma ngendlela ukulungiselela ekhaya phisa ngaphandle kokusebenzisa imvubelo, kuyafaneleka ukukhumbula iresiphi elandelayo. Polstakana unyaluthi wathela ilitha lamanzi abilayo futhi alethwe ngamathumba. Lanezela esilinganayo oat ishq ingcosana kasawoti. Phela amathumba, ususa emlilweni pan, embozwe ngesivalo futhi wafaka cishe ihora. I kwaphumela wokudla inyama egayiwe ziphathwe izaqathe kanye turnips, namanje egcwele 2 amalitha amanzi afudumele ishiywa sokunika cishe usuku. Ngemva isiphuzo ayabila, it is elicwengekileyo futhi selehlile. I ukuziqalela asele ingasetshenziswa futhi.
Ukukhuluma ngendlela ukulungiselela ekhofini ekhaya, kubalulekile ukusho indlela elandelayo. Ekuqaleni ukulungiselela Kvasnikov. Yenza lokhu ekupheleni kwekwindla, ebusika, zigcinwa esitsheni ingilazi ekamelweni lokushisa, njengoba ehlobo, bajwayele ukulungiselela isiphuzo. Ngakho, amazambane kanye beet bahlanza kahle, ukubeka ukupheka ngqo esikhumbeni. Ngemva ukuzimisela kwabo ekulungiseleleni puree nge umhluzi abenziwe lapho. Lanezela kwengcosana kashukela futhi rye noma kakolweni ufulawa, inhlama wayixova emaningi e ukungaguquguquki, ishiywa isikhashana. Ngemva ke seliphumile kancane, ezincane avule therefrom nemiqathane, okuyinto wafaka kuhhavini ubhake i-lokushisa (ngaphambili kuhhavini Russian esetshenziswa ngalezi zinhloso). Iphele ikhekhe kufanele ibe nombala ecebile segolide, lokhu kuzoncika ukubukeka Ngokuzayo yalesi siphuzo. Uma kudingeka, zisuthe ngokuhle amanzi, ushukela nemvubelo, baphuze kwezinsuku ezimbalwa waphikelela elicwengekileyo ngaphambi kokusetshenziswa.
Ungadliwa ukuthi ukupheka kvass ekhaya, inombolo enkulu. Basebenzisa ezihlukahlukene izithako, kodwa ihlanganisa bonke eyodwa - isiphuzo elimnandi futhi kuqabule etholwe ngenxa yalokho.